မခင်လှ ရဲ့ ဘိန်းမုန့်ကြီး – Hlataw.com
အိမျမှာနလေဲ ဘာထူးမှာမို့လို့လဲ။ ဒီနလေဲ့ လုပျစရာလေး နဲနဲပါးပါး လုပျပွီး လယျတဲထဲ ဆေးလိပျတိုလေးနဲ့ မှိနျးနတေုနျး ဗွုံးဆို ခငျလှ ပေါကျခလြာတယျ။ မကျြစိတဆုံး မွငျနရေတဲ့ လယျကှငျးပွငျကို ငေးပွီး ဟိုတှေးဒီတှေး တှေးနတောမို့ ဒီကောငျမ ဘယျကနေ ဘယျလို ရောကျလာမှနျးတောငျ မသိလိုကျဘူး။ ဦးမောငျလှကွီး ဆိုပွီး ကြုပျနာမညျချေါလို့ လယျတဲထဲ ဝငျလာမှ တှလေို့ကျတာ။ ခငျလှ ဆိုတာ ကြုပျတို့ ရှာထဲက ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ မုဆိုးမ ဖွဈနတော။ ပွောရရငျ ကြုပျနဲ့ ဖွဈဖူးတဲ့ မတူး တို့နဲ့ အရှယျတူပေါ့။ သူ့လငျက မနှဈက ကြုပျလို ပိုးထိတာ။ ကြုပျက ကံကောငျးလို့ မသပေမေဲ့ သူ့လငျ ကိုထှနျးသောငျ ကတော့ ကုလို့ မမှီလို့ အသကျပါ ပါသှားတာ။ အိမျထောငျကတြာဖွဈ တနှဈကြျော နှဈ နှဈ အမြားဆုံး ရှိအုံးမယျ ထငျတယျ။ ခုတော့ မုဆိုးမ ဖွဈပွီး သူ့တယောကျထဲ ဖွဈသလို ရုနျးကနျနလေရေဲ့။ “ဟဲ့ ဘာတုနျးဟ” သူချေါတော့ ကြုပျကလဲ ပွနျထူးပွီး ဝငျလာတဲ့ ခငျလှ ကိုကွညျ့မိတယျ။ ဒီကောငျမ မတှတေ့ာတောငျ အတျောကွာပွီ၊ ပွညျ့ပွညျ့ဖွိုးဖွိုး နဲ့ ကွညျ့လို့ကောငျးသား၊ ရှာသူဆိုတော့ ထမီက တိုတို၊ ပုဝါစုတျလေး ခေါငျးပေါငျးလို့၊ ဝလာလို့ ထငျပါရဲ့ ရငျဖုံးအကြီက ခပျကွပျကွပျ ဖွဈနတေော့ သူ့ရငျကို မနဲတငျးအောငျ ဆှဲထားသလိုဖွဈပွီး တငျးတငျးကွပျကွပျလေးနဲ့ဖေါငျးနတော ကွညျ့လို့တောငျ ကောငျးသေး။
ဒီကောငျမ ဒီကိစ်စ တခုထဲနဲ့တော့ ငါ့ဆီရောကျတာ မဖွဈနိုငျဘူး၊ ဒီကိစ်စက ရှာထဲတှေ့ လှမျးမေးလိုကျလဲ ရတဲ့ဟာကို ဘာကွောငျ့ ခွရှေညျပွီး ငါ့လယျထဲထိ ရောကျလာလဲ မသိဘူး၊ တှေးမိပွီး စကားလမျးကွောငျးပွောငျးလိုကျတယျ။ “တှတေု့နျးစပျစုအုံးမယျ၊ နငျကိုကွညျ့ရတာ ခြောလို့လှလို့ အရှယျကလဲ ငယျ၊ ရုပျရညျလေးကလဲရှိ၊ တယောကျထဲ ရုနျးကနျနရေတာ၊ မပငျပနျးဘူးလား၊ တပငျလဲ တပငျထူ ဘို့ မစဉျးစားတော့ဘူးလား” “အမလေး ပွောမှ ပွောတတျတယျ ဦးမောငျလှကွီးရယျ၊ ကမြလို မုဆိုးမ ဘယျသူ ယူမတုနျး” “ဟ မုဆိုးမ ဆိုပမေဲ့ နငျက လှတုနျး ပတုနျး ဆိုတော့ ကွိုကျတဲ့သူပျေါပွီး ယူမဲ့သူ ရှိမှာပေါ့ဟ” “မရှိပါဘူးတျော၊ မုဆိုးမ ဆိုမှ ဘယျသူကယူမလဲတော့၊ ပွီးတော့ ခငျလှက ဘာလှလို့လဲ၊ ရှာထဲက အပြိုတှကေ ခငျလှထကျ အမြားကွီး သာပါ့တျော၊ ယူခငျြးယူ သူတို့ သှားယူမှာပေါ့” “အေးလေ ဒါလဲဟုတျတာဘဲ၊ မုဆိုးမ ဆိုတော့လဲ ခကျသား၊ နငျကလဲ ကံဆိုးပါတယျ၊ နငျ့ယောကျကြားက ပိုးထိတာ အသိနောကျကလြို့ ဖွဈသှားတာ၊ ငါ့လိုသာ အသိစောရငျ ကုရငျ မှီတယျ” “ကုသိုလျကံပေါ့ ဦးမောငျလှရယျ၊ ဘယျတတျနိုငျမလဲ” ကြုပျ အဖွဈနဲ့ယှဉျပွောရငျးနဲ့ ကြုပျ မအေး ကို ရုတျတရကျ သတိရသှားတယျ။
ခငျလှ သူလဲ မအေးလို ဖွဈနလေို့ မြားလား၊ ဒါကွောငျ့ သူ မုဆိုးမ ဖွဈတာထငျတယျ။ စဉျးစားမိတာနဲ့ လှတျကနဲ ပါးစပျက ထှကျသှားတယျ။ ကြုပျဝသီ ကိုက ဒီလိုဘဲ၊ “ငါ အခုမှ စဉျးစားမိတယျ၊ နငျ မုဆိုးမ ဖွဈတဲ့ အကွောငျး . . .” ပွောရငျးတမျးလမျး ကြုပျ တိကရဲ ရပျသှားတယျ။ ဟိုကျ သူက မိနျးခလေး ပွောလို့ မသငျ့တျောဘူးထငျတယျလို့ စဉျးစားမိပွီး စကားကို လြှောခလြိုကျတယျ။ “အာ . . နငျ့ကို ပွောလို့ မဖွဈပါဘူး၊ နငျလဲ သိခငျြသိမှာပေါ့” “ဘာမြားလဲ ဦးမောငျလှကွီးရဲ့၊ ကမြကဘာသိရမှာလဲ” “အေး အေး မသိလဲ ပွီးရော၊ ဘာမှ မဟုတျပါဘူး” ကြုပျဖာသာကြုပျ အတှေးပေါကျပွီး ပွုံးစိစိ နဲ့ သူ့ကိုပွောတော့ သူက ပိုသိခငျြတယျနဲ့ တူတယျ။ အတငျး မရမက မေးတော့တာဘဲ။ “ဘာလဲ ဦးမောငျလှကွီး၊ ပွော ပွော” “အာ နငျကလဲ ပွောလို့ မကောငျးပါဘူးဆိုမှ အတငျးမေးတော့တာဘဲ” “ဘာလို့ပွောလို့ မကောငျးရမှာလဲ၊ ဘာအကွောငျးမို့လဲ ပွော ပွော” “ဟ နငျသိပွီးသားလဲ ဖွဈခငျြဖွဈမှာပေါ့” ဒီလိုနဲ့ သူကလဲ အတငျးမေး၊ ကြုပျကလဲ ဒါဘဲ အပျကွောငျးထပျပွောရငျး ဂြာအေး သူ့ အမရေိုကျတဲ့ ဇတျခငျးနတော အတျောကွာတယျ။ နောကျဆုံးတော့ “ကဲ နငျဒီလောကျ သိခငျြနတော ရှမေ့ကျြနှာ နောကျထားပွီး ပွောရတာပေါ့။
နောကျမှ ငါ့ကို အဆိုးမဆိုနဲ့” “မဆိုပါဘူး၊ တခါထဲ ပွောဆိုမပွောဘူး ဈေးက ကိုငျနသေေးတယျ” “အျော နငျကလဲ ပွောသငျ့လား မသငျ့လားလဲ ရှိသေးတယျလဟော” “အမလေး ဒီလူနဲ့ ဒီလူ၊ ပွောပါဆိုမှ ရှညျနသေေးတယျ တခါတညျး” “ကဲ ဒီလောကျ သိခငျြတာ ပွောမယျ” ဆိုပွီး အျောပွောရငျတောငျ ဘယျသူမှ မကွားတဲ့ နရောမှာ သူ့ အနားနဲနဲတိုးလို့ လသေံကို နဲနဲနှိပျပွီး “နငျ မုဆိုးမ ဖွဈတာ နငျ့ ဟိုဟာ မှာ မှဲ့ပါလို့မဟုတျလား” “ဘယျလို ဘယျလို ဦးမောငျလှကွီး ဘယျဟိုဟာလဲ” “အာ နငျကလဲ၊ နငျ့ ဟိုဟာ ပါဆို။ နငျ့ မိနျးမ ဟဝှာလဟော၊ ဟုတျတယျမဟုတျလား၊ ကဲ ပွော” ကြုပျအပွောကို ခငျလှ ဘာသဘောကတြယျမသိ၊ တခဈခဈရယျရငျး ပွနျပွောတယျ။ “ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ၊ ဦးမောငျလှကွီးကလဲ၊ ကွံကွံဖနျဖနျ လာပွောပွနျပွီ” “ဟဲ့ ကွံကွံဖနျဖနျ ပွောတာမဟုတျဘူးဟ၊ ငါ့ကို မှဲ့ကမျြးကွတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျကွီးက သခြောပွောပွသှားတာ၊ အဲ့နရော မှဲ့ပါတဲ့ မိနျးမတှကေ ယောကျကြားယူရငျ မုဆိုးမ ဖွဈတတျတယျတဲ့၊ နငျ့မှာ ပါတယျမို့လား၊ ငါ့ကို မရှကျနဲ့ မှနျမှနျပွော” “ဘယျကလာ ဦးမောငျလှကွီးမြား ဘာရှကျရမှာလဲ၊ အဲဒီနရောမှာတော့ မပါ ပါဘူးတျော၊ ကြုပျတကိုယျလုံးမှာ မှဲ့က ရငျသားမှာသာရှိတာ၊ ရှိတာမှ သေးသေးလေးတောငျ မဟုတျဘူး ထငျးနတော၊ ဟောဒီနရောမှာ” ခငျလှက သူ့မှဲ့ရှိတဲ့ ညာဘကျရငျသားနရောကို အင်ျကြီပျေါက လကျညိုးနဲ့ ထောကျပွရငျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဘဲပွောတယျ။ ရှကျကိုးရှကျကနျးမရှိ။ မုဆိုးမ မို့လားတော့ မသိ၊ ကြုပျကလဲ အဲ့လို ပှငျ့လငျးမှ သဘောကတြာနဲ့တော့ အံကိုကျ။
“ဒါဆို နငျမုဆိုးမ ဖွဈတာ အဲဒါနဲ့ မဆိုငျဘူး ထငျတယျ၊ ကံတရားကွောငျ့ဘဲလို့ ပွောရတော့မယျထငျတယျ၊ နငျ့ယောကျကြား ထှနျးသောငျ ဆုံးတော့ နငျတို့ ညားတာ တနှဈကြျောကြျောဘဲ ရှိအုံးမယျ ထငျတယျ၊ “အငျး တနှဈနဲ့သုံးလ ဘဲရှိသေးတာ၊ ခငျလှ ကံကို ဆိုးပါတယျ” “အေးပေါ့ဟာ။ သတ်တဝါ တခု ကံတခုပေါ့၊ ဘယျတတျနိုငျမလဲ၊ ဒါနဲ့ တခါတလေ နငျ့ယောကျကြားကို သတိမရဘူးလား” “ရတာပေါ့ ဦးမောငျလှကွီးကလဲ၊ မေးမှ မေးတတျတယျ” “ဟဲ့ ငါပွောတာ ဟို ရိုးရိုးသားသား သတိရတာ မေးတာမဟုတျဘူးဟ” ကြုပျက ရယျကြဲကြဲ နဲ့ သှေးတိုးစမျးလိုကျတယျ။ ခငျလှက ကြုပျခပျပွုံးပွုံးနဲ့ လှမျးမေးတာကို သဘောပေါကျပုံနဲ့ ကြုပျပေါငျကို လှမျးရိုကျရငျး “ဦးမောငျလှကွီး” လို့ သဘောပေါကျပုံနဲ့ ကြုပျကို ခပျဆတျဆတျ လသေံနဲ့ ကြုပျကိုလှမျးအျောတယျ။ အျောတယျသာပွောသာ လသေံက မကွိုကျတဲ့ အသံမဟုတျမှနျး ကြုပျခကျြခွငျးသိလိုကျတာကွောငျ့ အလြှော့မပေးဘဲ “ဘာလဲဟ၊ ငါက သိခငျြလို့” “ဘာလို့ သိခငျြရတာလဲ” “အျော ငါတို့ အဖွဈနဲ တိုကျဆိုကျသလားလို့” “ဘာအဖွဈလဲ” “နငျသိတဲ့ အတိုငျး သနျးမွလဲ ယောကျကြားနဲ့ ကှဲပွီး ပွနျရောကျလာတာ မို့လား၊ အဲဒီမှာ သူလဲ ခန ခန သတိရပွီး ငါနဲ့ ညားတာလေ၊ ဟား ဟား ဟား ဟား” “ဦးမောငျလှကွီးကတော့ ပွောပွီ၊ သနျးမွတော့ ဟုတျတာပေါ့၊ ကြုပျမှာတော့ သတိရလဲ ညားမဲ့သူ မရှိပါဘူးတျော” “ပွောပါ နငျတကယျသတိရလား” ခငျလှ ခကျြခွငျး မဖွေ၊ ကြုပျကို လှမျးကွညျ့တယျ။ ကြုပျကလဲ ခငျလှကို ကွညျ့တယျ။ ကွညျ့ရငျး ကြုပျရငျထဲ တဒုတျဒုတျနဲ့ သှေးပူလာသလိုဘဲ၊ ပွောငျကွီးတောငျ နဲနဲတငျးလာတယျ။
ကြုပျတို့ အခငျြးခငျြး မကျြစိခငျြး ခနဆုံပွီး ခငျလှ ပွုံးတုနျးတုနျး လုပျရငျး ဟိုဘကျလှညျ့သှာားတယျ။ ပွီးတော့ “ရတာပေါ့ ဦးမောငျလှကွီးကလဲ၊ မရဘဲ နမေလား၊ ဟှနျး ဘာတှေ လြှောကျမေးနမှေနျး မသိဘူး၊ မပွောလိုကျခငျြဘူး” တဲ့ကြုပျနဲနဲ သဘောပေါကျသှားတယျ၊ လူသူမနီးတဲ့ ဒီလိုနရောမှာ ကြုပျနဲ့ ခငျလှ နှဈယောကျထဲ။ သူ့စိတျထဲလဲ တခုခု ဖွဈနပွေီဆိုတာ ကြုပျသိလိုကျပွီ၊ “ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ၊ ငါသိတယျ ငါသိတယျ” ကြုပျက ရယျကြဲကြဲ နဲ့ လှမျးပွောလိုကျတော့ သူက “ဘာသိတာလဲ၊ ဦးမောငျလှကွီးနျော” “နငျသတိရတာ ကိုပွောတာလေ၊ ငါသိတာပေါ့၊ ထှနျးသောငျကွီး အကွောငျး၊ ဒီကောငျလား အရငျက ငါတို့ သူ့ကို ထှနျးတောငျလို့ ချေါတာ၊ တောငျလှနျးလို့ မိနျးမ မွနျမွနျရတာလေ ဟား ဟား ဟား ဟား” “ဦးမောငျလှကွီးကတော့ ပွောပွီ ခဈ ခဈ” “အမယျ ငါပွောတာ မဟုတျတာကနြတောဘဲ၊ ကဲပွော တနဘေ့ယျနှဈခါလဲ ဟား ဟား ဟား” “သှား . . ဦးမောငျလှကွီးရော မတောငျတာကနြတောဘဲ၊ တောငျလှနျးလို့ သနျးမွနဲ့ ညားတာမဟုတျဘူးလား” “ဟား ဟား ဟား ဟား အေးပေါ့ဟ” “ခဈ ခဈ ခဈ ဦးမောငျလှကွီး ပုံကွညျ့တာနဲ့ ဘယျလောကျတောငျမှနျး လူတိုငျးသိတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရှာထဲက ကောငျမတှေ ပွောနကွေတာ ဒီလောကျ ထတဲ့ သနျးမွ မောငျလှ နဲ့ တှမှေ့ ငွိမျကသြှားတာ တဲ့ ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ” ရှာထဲကကောငျမတှေ တကယျပွောတာလား၊ ခငျလှဘဲလုပျဇတျထှငျတာလားမသိ။ ဒီအပွောနဲ့ဆို အခွနေကေ ကောငျးမှနျး ကြုပျသိလိုကျပွီ။ “ဟား ဟား ဟား ဟား နငျပွောတာမှနျတယျ၊ အခုတောငျ နငျ့နဲ့ တှပွေီ့း တောငျနပွေီနျော” တဟားဟားနဲ့ စသလိုနောကျသလို ပွောရငျး သူ့လကျ လမျးဆှဲလိုကျတယျ၊ “အဲ့ ဦးမောငျလှကွီးကလဲ . . . .” သူ့လသေံ မဆုံးခငျမှာ ကိုယျပါ လှမျးဖကျလိုကျတော့ ခငျလှက လသေံခပျပြော့ပြော့နဲ့ “ဦးမောငျလှကွီးရယျ ခငျလှကို အထငျတော့ မသေးပါနဲ့နျော” ညငျးတာတော့ မဟုတျ၊ သူ့ပုံက ခံလဲခံခငျြတယျ။ အထငျသေးမှာလဲ စိုးတဲ့သဘောလို ဖွဈနတောမို့ “မသေးပါဘူးဟာ၊ ငါ နငျ့ကို နားလညျပါတယျ။ ငါလဲ နငျ့လိုပါဘဲဟာ” “ဦမောငျလှကွီးကလဲ ပွောပွီ၊ ဦးမောငျလှကွီးက မိနျးမနဲ့ဟာ” “မိနျးမနဲ့ ဆိုပမေဲ့ ခု သနျးမွက ငါကို အနားမကပျမခံတော့ဘူးဟ” “ဒီလောကျတောငျတဲ့သူ အနား အကပျမခံဘဲ နမေလား၊ လြှောကျပွောနေ” “နငျမသိပါဘူးဟာ၊ ငါတို့အကွောငျး။ သနျးမွက အခုတလော ဘာဖွဈတယျ မသိဘူး၊ ငါ့ကို အကပျကိုမခံတော့တာ၊ သူရိုးသှားလို့နမှောပေါ့” “ဒါကွောငျ့ ခု ခငျလှကို လာကပျတာပေါ့လေ ဟုတျလား” “ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဒါကတော့ နငျနဲ့ငါက လိုအပျတာခငျြးတူနတောကိုး၊ လူဆိုတာ လိုအပျတာ တူမှ ပေါငျးလို့ရတာဟ” “ခဈ ခဈ ဦးမောငျလှကွီးက ပွောတတျတယျ” “ဟဲ့ ငါပွောတာ မဟုတျလို့လား၊ လာ လာ ငါ့ပေါငျပျေါ အိပျခလြိုကျ တျောကွာ အဝေးကတယောကျယောကျဖွတျသှားရငျ နှဈယောကျပူးနတော မွငျသှားလို့ လာစပျစုနအေုံးမယျ” “ဟှနျး ဦးမောငျလှကွီးက ရိုးမလိုလိုနဲ့ ဉာဏျခညျြးဘဲ” ပါးစပျကသာ ပွောပမေဲ့ ခငျလှက ဘေးဘီ လှမျးကွညျ့ပွီး ကြုပျပေါငျပျေါ လှဲခလြိုကျတယျ။
ပေါငျကွားက ပွောငျကွီးကတော့ စားရတော့မယျမှနျး သိလို့လား မသိ တျောတျောလေးကို တငျးနပွေီ၊ ကြုပျက ခငျလှ ခေါငျးကို သသေခြောခြာ ကြုပျပေါငျကွားထဲ ဆှဲထညျ့လိုကျတော့ တငျးနတေဲ့ ပွောငျကွီးက ခငျလှ ခေါငျးနဲ့ ထိရော။ “အမလေး ဘာကွီးလဲဟ ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ” “သိခငျြရငျ ကိုယျ့ဖာသာကွညျ့၊ ငါက ခု နငျ့ နို့က မှဲ့ကို ကွညျ့မလို့” “ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ” ပွောရငျး ကြုပျပေါငျပျေါ ခေါငျးတငျပွီး ပကျလကျလဲနတေဲ့ ခငျလှ အကြီကို တလုံးခငျြး ဖွုတျလိုကျတယျ။ ခငျလှက ကြုပျကွယျသီးဖွုတျနတောကို မညငျး။ “ဦးမောငျလှကွီးနျော၊ ခငျလှက ကိုထှနျးသောငျဆုံးကတညျးက ဘယျသူနဲ့မှ ဖွဈခဲ့တာ မဟုတျဘူး၊ အထငျတော့ မသေးနဲ့၊ ခု ဦးမောငျလှကွီး မို့လို့” “ဒါတှေ ငါနားလညျပါတယျ ခငျလှရာ၊ နငျပွောမနနေဲ့၊ ခု ငါ့ကို ထှနျးသောငျလို့ဘဲ သဘောထားလိုကျ” “ဦးမောငျလှကွီကရော ခငျလှကို သနျးမွ လိုသဘောထားမှာမို့လို့လား” “ငါက နငျ့ကို သနျးမွ လို့တော့ သဘောမထားပါဘူး။ နငျက ပိုလှနတေဲ့ဟာ၊ နငျ့ကို နငျလို့ဘဲ သဘောထားမယျ” “ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ ဦးမောငျလှကွီး ကတော့လေ ပွောတတျတယျ” ပွောရငျ အင်ျကြီကွယျသီးတှေ ပွုတျတော့ ဘျောလီကို ဆှဲလှနျရငျး ထငျးနအေောငျ ပျေါနတေဲ့ မှဲ့ကို လကျနဲ့ အသာပှတျကွညျ့ရငျး “မှဲ့က နငျ့ရငျသားမှာ ထငျးကနဲဘဲဟ၊ ဒါကွောငျ့ထငျတယျ နငျ့နို့တှေ ထှားတာ၊ ငါက အဲလိုမှ ကွိုကျတာ” ပွောလဲပွော လကျက နို့အုံကွီးကို ဆုတျလို့၊ အိကနဲ အိကနဲ ခငျလှနို့ ကိုငျလို့ကငျေးခကျြ၊ ကိုငျနရေငျး အားမရတော့ ကုနျးစို့လိုကျတယျ။
“အိ” ခငျလှဆီက အိ ကနဲ အခကျြအသံထှကျပွီး တိတျသှားတယျ။ ခနလေးကွာတော့ တဟငျးဟငျး နဲ့ အသကျရှုသံ ခပျပွငျးပွငျးထှကျလာတယျ။ ပွီးတော့ သူ့လကျက ကြုပျ ခန်တာကိုယျ ကိုဟိုပှတျဒီပှတျနဲ့၊ နောကျ အလိုလို ကြုပျပေါငျကွားထဲ ဝငျလာပွီး ပွောငျကွီးကို ဖမျးဆုတျလိုကျတယျ။ အဲဒါမှ ကြုပျကွိုကျတာ၊ ခငျလှနို့က ထှားကလဲထှား၊ ကိုငျလို့လဲကောငျး၊ စို့လို့လဲ ကောငျးတာမို့ အတျောကွာတယျ၊ တမောစို့ပွီးမှ “ခငျလှ” “အငျ” “နငျ ရှာထဲက ရခေဲခြောငျးစားဖူးလား” “အငျး ဘာဖွဈလို့လဲ” “အျော ငါ့ ရခေဲခြောငျး စားမလားလို့” “ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ ဦးမောငျလှကွီးဟာက ရခေဲခြောငျးလဲ မဟုတျဘူး၊” ပါးစပျက ပွောပမေဲ့ ခငျလှ ပကျလကျလှဲနရောက ကြုပျဘဲ စောငျးလို့ ကြုပျကောငျပွောငျကွီးကို မကျြနှာခငျြး ဆိုငျလိုကျတယျ။ သခြောကိုငျကွညျ့ရငျး သူ့ နှုတျခမျးကို ဝကျလိုစူလို့ ပွောငျကွီးနဲ့ တလေို့ကျ ခှာလိုကျ လုပျကစားနရေငျး “ဦးမောငျလှကွီးရော ဘိနျးမုံ့ စားဖူးလား ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ” သူ့အပွောကို ကြုပျ ခကျြခွငျး သဘောပေါကျတာမို့ “ဘာလဲ နငျ့ယကျေကြား ထှနျးသောငျကွီးက ဘိနျးမုံ့ ကွိုကျလို့လား” “အငျး အရမျးကွိုကျတာ” “သူကွိုကျတာလား နငျကွိုကျတာလား” “ခဈ ခဈ ခဈ ခဈ” ကြုပျဘာမှမပွောတော့၊ ကြုပျ ခငျလှ ဘေးပွောငျးပွနျအိပျခလြိုကျတယျ၊ ကြုပျခေါငျးက ခငျလှတငျပါးနား၊ သူ့ ထမီကို ဆှဲဖွခေလြို့ ကြုပျမကျြနှာပျေါ ဆှဲတငျလိုကျတယျ။ အဲဒီမှာ ပွောငျကွီး ခငျလှပါးစပျထဲ ရောကျသှားမှနျး ကြုပျသိလိုကျတယျ။
ခငျလှခွထေောကျတှကေို ကှေးလို့ ကြုပျကိုယျပျေါမှာ ဒူးထောကျသလို ပုံစံပွောငျးလိုကျတော့ သူ့ရဲ့ ဘိနျးမုံ့ကွီးက ကြုပျမကျြစိရှေ့ ထငျးကနဲ။ ဆုံးသှားတဲ့ သူ့လငျ ကွိုကျလဲကွိုကျစရာဘဲ၊ အမှေးတှထေူလပွဈနဲ့ မဲတူးနတေဲ့ မုံ့မြိုးမဟုတျ၊ အမှေးကခပျပါးပါးနဲ့ နှုတျခမျးသားက ညိုတိုတို ဖွဈနပေမေဲ့ အကှဲကွောငျးအထဲက နီရဲလို့ အရညျကွညျ တစို့စို့နဲ့ အစကေို့ ပွူလို့၊ ကွညျ့တာနဲ့ ဖိစုတျခငျြစရာကောငျးနတော။ ကြုပျလဲ သသေခြောခြာကွညျ့ရငျး သူ့တငျပါးကို သခြောကိုငျပွီး ကြုပျပါးစပျဝ တခေ့လြိုကျတယျ၊ “အီး . . .” ခငျလှဆီက ရုတျတရကျ အသံကွားရပွီး ပွနျပြောကျသှားတယျ။ ပွီးတော့ ပွောငျကွီးဆီက နှေးကနဲ နှေးကနဲ နဲ့။ နှဈယောကျသား အပေးအယူ မြှနတော ဘယျညာလူးလို့၊ ခငျလှက အပျေါရောကျလိုကျ၊ ကြုပျက အပျေါရောကျလိုကျ၊ နောကျဆုံး ကြုပျမရတော့၊ ခငျလှရေ ငါထှကျပဟ ဆိုပွီး တဗွဈဗွဈ နဲ့ အားရပါးရ ပနျးထှကျတော့တာဘဲ။ အဲဒီမှာ နှဈယောကျသား ညိမျကသြှားတာ။ခနလောကျ ညိမျနပွေီး “အမလေး ခငျလှရယျ ဘယျလိုမြား စုတျထညျ့လိုကျတာလဲဟ၊ ငါတောငျ မအောငျ့နိုငျဘူးဖွဈသှားတယျ” ကြုပျက ငုတျတုတျထထိုငျလို့ မောဟိုကျသံနဲ့ ပွောတော့ ခငျလှက တခဈခဈရယျတယျ။ သူ့ပုံကွညျ့ရတာ ဘာမှမဖွဈသလိုနဲ့ ကြုပျ သူ့ကို လုပျပေးတာ ထိမှထိရဲ့လားလို့ သံသယဝငျလာတာမို့ လှမျးမေးလိုကျတယျ။ “ဟဲ့ နငျ့ကိုငါ လုပျပေးတာရော ကောငျးရဲ့လား” “ဦးမောငျလှကွီးကလဲ . . ဘာတှေ လာမေးနတောလဲ” “ဟဲ့ ငါလုပျတာ ကောငျးမကောငျး သိခငျြတာပေါ့ဟ၊ ပွောစမျးပါ” “မသိဘူးလား ဒီမှာ ဒီလောကျ လူးနတော၊ တခါတညျး လူကို မနားတမျး လုပျနတေဲ့ဟာ၊ ဒီမှာ အသကျတောငျရှုလို့ မရတော့ဘူး ဟှနျး” ခငျလှက ညုတုတု နဲ့ ပွနျပွောတဲ့ လသေံကွောငျ့ ကြုပျမှာအမောပွရေုံက စိတျကပွနျလညျလာသလိုတောငျ ဖွဈလာတယျ။
“ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ နငျ့ဘိနျးမုံ့က တကယျစားကောငျးတယျဟ၊ ငါလုပျတာ နငျရော ပွီးလား” “ပွီးလိုကျတာမှ ဦးမောငျလှကွီးရယျ၊ တရှုးရှုးနဲ့ ပနျးနတော ဦးမောငျလှကွီးကို အားတောငျနာတယျ” “ဟဲ ဟဲ ဒါမြိုးက အားမနာရဘူးဟ၊ ပနျးသာပနျး၊ မြားမြားပနျးလေ ငါကွိုကျလဘေဲဟ” စကားသာပွောနပေမေဲ့ ခငျလှက ပကျလကျလဲနရောက မထ၊ ကြုပျလဲ ပွီးသာပွီးသှားတယျ အာသာကမပွေ သလိုလို၊ သူ့အပွော နဲ့ အမူအယာကို ကွညျ့ပွီး စိတျက ပွနျထလာတာမို့ သူ့ပေါငျကွားထဲ ဝငျထိုငျရငျး သူ့ခွထေောကျကို ဆှဲမလို့ ကြုပျကောငျပွောငျကွီကို သူ့ ဘိနျးမုံ့နဲ့ ကပျပေးလိုကျတယျ။ ခငျလှက ကြုပျအဖွဈကို ပွုံးကွညျ့ရငျး ကြုပျအလိုကြ ခွမွှေောကျပေးတယျ။ သူလဲ မဝသေးတဲ့ပုံ။ ဘိနျးမုံ့နံ့ ရတာနဲ့ အနျထားလို့ ခေါငျးစိုကျသယယောငျယောငျ ဖွဈနတေဲ့ ပွောငျကွီးက ခကျြခွငျး ခေါငျးပွနျထောငျလာတော့တာဘဲ။ ဒါမြိုးဆို ကြုပျကောငျပွောငျကွီးက စိတျခရြတယျ။ ၃ ခြီလောကျတော့ မနားတမျးခေါငျးထောငျနိုငျတဲ့ကောငျ။ သူ့ဘိနျးမုံ့ကို ပွောငျကွီးလာထောကျတာနဲ့ ခငျလှဆီက “ဖွေးဖွေးအရငျလုပျနျော ဦးမောငျလှကွီး၊ ခငျလှ မလုပျတာအရမျးကွာပွီ” “အေးပါ ငါသိပါတယျဟ” ကြုပျလဲ အခြိနျမဆိုငျးဘဲ ခေါငျးထောငျနတေဲ့ ပွောငျကွီးကို စိုရှဲ ခြှဲအိ နူးညံ့နတေဲ့ ခငျလှဘိနျးမုံ့ထဲ အသာဘဲ ဖိထိုးလိုကျတော့ ခပျလှယျလှယျဘဲ တထဈခငျြးတိုးဝငျသှားတော့တာပါဘဲ။ ဒီကောငျမ မလုပျတာ အရမျးကွာပွီ ပွောပမေဲ့ အပေါကျကတော့ ပိတျမနေ၊ ဧကန်တ သူ့လငျ ထှနျးသောငျကို သတိရတိုငျး ခရမျးသီးနဲ့ စခနျးသှားနလေား မသိ။ သူ့အိမျနောကျဖေးမှာလဲ တနိုငျစာ ခရမျးစိုကျခငျးနဲ့။ အဆုံထိ ပွောငျကွီးကို ထိုးသှငျးပွီး ခငျလှ မကျြနှာကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ မကျြစိလေးမှေးလို့ ပွုံးတုံးတုံး မကျြနှာပေးနဲ့ ပါးစပျမပှငျ့တပှငျ့ဟလို့၊ ကွညျ့စမျး အပွညျ့အဝ ကို အရသာ ခံနတော။ သူ့ပုံကွညျ့ပွီး ကြုပျတျောတျော အားတကျလာတယျ။
ကြုပျလဲ မောနတောမို့ ဆောငျ့ခကျြကိုရပျပွီး အဆုံးထိ ထိုးသှငျးလို့ သူ့ကို လှမျးမေးလိုကျတယျ။ “ပွီးသှားလို့လား” “အငျး၊ ဦးမောငျလှကွီး အရမျးကွမျးတာဘဲ” မကျြနှာပေးက ခပျပွုံးပွုံးနဲ့ ပွောလိုကျတဲ့ လသေံက မခံနိုငျတဲ့ လသေံမဟုတျ။ သဘောကတြဲ့လသေံ။ “မကွမျးပါဘူးဟ၊ ဒီလောကျတော့ ရှိမှာပေါ့၊ ဒါတောငျ ငါကလြှော့ထားတာဟ” ကြုပျကလဲ ပွောရငျး ဖွဲကားထားတဲ့ သူ့ပေါငျနှဈခြောငျးကို စုလို့ ဘိုကျပျေါတှနျးတငျလိုကျတယျ။ ကွှတကျလာတဲ့ သူ့ဘိနျးမုံ့ကို တခကျြ နှဈခကျြလောကျ ဖိအဆောငျ့မှာ “နားပါအုံးလား ဦးမောငျလှကွီးရယျတဲ့” ကွညျ့ရတာ သူလဲ နားခငျြပုံဘဲ၊ ကြုပျကလဲ ခန နားခငျြတာနဲ့ အတျောဘဲ။ ခန နားပွီး နငျအပျေါက စိတျကွိုကျလုပျ ဟုတျလား လို့ပွောရငျး မနားခငျ အဆဈယူတဲ့ သဘောနဲ့ လေးငါးခကျြလောကျ ဆကျတိုကျလေး ဆောငျ့ပွီး သူ့ဘေးလှဲခလြိုကျတယျ။ နှဈယောကျလုံးက အတှကွေုံ့ ရှိပွီးသားမို့ အထူးပွောနစေရာ မလိုတော့။ အခွအေနကေ အားနာစရာလဲ မလိုတော့။ နှေးနှေးတလှညျ့ မွနျမွနျတလှညျ့၊ နားလိုကျ လုပျလိုကျနဲ့ ခငျလှနဲ့ ကြုပျ ပုံစံမြိုးစုံ သုံးပွီး စခနျးသှားလိုကျတာ ညနစေောငျး အိမျပွနျတော့ ကြုပျမှာ ဒူးတောငျ ခြောငျလို့။ ကြုပျလဲ ခုမှဘဲ အဆငျပွသှေားတယျ။ မအေးကိုလဲမေ့၊ သနျးမွ အကပျမခံလဲ ဂရုမစိုကျတော့။ ခငျလှလောကျ ကြုပျအပျေါ ဘယျသူမှ မကောငျးမှနျး ကြုပျကောငျးကောငျးသိသှားတယျ။……ပွီးပါပွီ။
ဘုန်းကြီးဘဝ နဲ့ ကျုပ် စိတ်တော်တော် ပြန်ငြိမ်သွားတယ်။ ခု ဘုန်းကြီး လူထွက်ပြီး သန်းမြ နဲ့ ပြန်နေတော့ အရင် အတိုင်းပါဘဲ၊ သန်းမြလဲ ကျုပ်နား ကပ်ကို မကပ်တော့၊ ည အိပ်ချိန်တောင် တယောက်နဲ့ တယောက် ခပ်ခွာခွာ။ ကြည့်ရတာ သန်းမြ ဒီကိစ္စ အရင်လို စိတ်ဝင်စားပုံ မရတော့သလိုဘဲ၊ ကျုပ်ကလဲ နေသားနဲနဲကျနေပြီဆိုတော့ အရင်ကလိုတောင်းမနေတော့၊ ဒီတော့ သန်းမြနဲ့ ကျုပ်လဲ လင်မယား ဆိုပေမဲ့ လင်မယား အရာမမြောက်တောင် အတော်ကြာပေါ့။ ကျုပ် ဘုန်းကြီး လူထွက်ရတာလဲ လယ်လုပ်ငန်း ပြန်စချိန်ရောက်လို့ ဆိုရမယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်လဲ လယ်ထဲ နေ့တိုင်းသွား၊ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်စရာ ရှိတာ ကြိုလုပ်ပေါ့။ ကောက်စိုက်ချိန်တော့ မကျသေးပါဘူး။ ခုမှ လယ်ကွင်း ရေတင်ခါစ၊ တချို့ကွင်းတွေဆို ရေတောင် မတင်သေးဘူး။ ဒီတော့ ကျုပ်လဲ တနွေလုံးပြစ်ထားတဲ့ ကျုပ်တဲလေး ပြင်သင့်တာပြင် ကန်သင်းရိုးလေး ဖို့တန်ဖို့ ပေါ့၊ လယ်ထဲဘဲ တနေ့နေ့ အချိန်သွားဖြုန်းနေလိုက်တယ်။
အိမ်မှာနေလဲ ဘာထူးမှာမို့လို့လဲ။ ဒီနေ့လဲ လုပ်စရာလေး နဲနဲပါးပါး လုပ်ပြီး လယ်တဲထဲ ဆေးလိပ်တိုလေးနဲ့ မှိန်းနေတုန်း ဗြုံးဆို ခင်လှ ပေါက်ချလာတယ်။ မျက်စိတဆုံး မြင်နေရတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်ကို ငေးပြီး ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးနေတာမို့ ဒီကောင်မ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရောက်လာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဦးမောင်လှကြီး ဆိုပြီး ကျုပ်နာမည်ခေါ်လို့ လယ်တဲထဲ ဝင်လာမှ တွေ့လိုက်တာ။ ခင်လှ ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ရွာထဲက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မုဆိုးမ ဖြစ်နေတာ။ ပြောရရင် ကျုပ်နဲ့ ဖြစ်ဖူးတဲ့ မတူး တို့နဲ့ အရွယ်တူပေါ့။ သူ့လင်က မနှစ်က ကျုပ်လို ပိုးထိတာ။ ကျုပ်က ကံကောင်းလို့ မသေပေမဲ့ သူ့လင် ကိုထွန်းသောင် ကတော့ ကုလို့ မမှီလို့ အသက်ပါ ပါသွားတာ။ အိမ်ထောင်ကျတာဖြစ် တနှစ်ကျော် နှစ် နှစ် အများဆုံး ရှိအုံးမယ် ထင်တယ်။ ခုတော့ မုဆိုးမ ဖြစ်ပြီး သူ့တယောက်ထဲ ဖြစ်သလို ရုန်းကန်နေလေရဲ့။ “ဟဲ့ ဘာတုန်းဟ” သူခေါ်တော့ ကျုပ်ကလဲ ပြန်ထူးပြီး ဝင်လာတဲ့ ခင်လှ ကိုကြည့်မိတယ်။ ဒီကောင်မ မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာပြီ၊ ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး နဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းသား၊ ရွာသူဆိုတော့ ထမီက တိုတို၊ ပုဝါစုတ်လေး ခေါင်းပေါင်းလို့၊ ဝလာလို့ ထင်ပါရဲ့ ရင်ဖုံးအကျီက ခပ်ကြပ်ကြပ် ဖြစ်နေတော့ သူ့ရင်ကို မနဲတင်းအောင် ဆွဲထားသလိုဖြစ်ပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးနဲ့ဖေါင်းနေတာ ကြည့်လို့တောင် ကောင်းသေး။
“ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဦးမောင်လှကြီးရေ၊ အားနေတာနဲ့ လျှောက်လာတာ၊ ပြီးတော့ ဦးမောင်လှကြီးကိုလဲ မေးစရာ ရှိလို့” “ဘာမျာလဲဟ” “တခြားမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီနှစ် ဦးမောင်လှကြီး လယ်မှာ ကောက်စိုက်ဘို့ လူပြည့်သွားပြီလားလို့” “ဘာလဲ နင် ငါ့လယ်မှာ လာစိုက်မလို့လား” “အင်း၊ အဲဒါလဲ လာမေးတာ” “ဒါဆိုရပါတယ်၊ အချင်းချင်းတွေဘဲ၊ လာစိုက်” “ဒါဆိုလဲ ကျေးဇူးပါဘဲတော်” ပြောရင်း ဆိုရင်း ခင်လှက ကျုပ်ဘေး ဝင်ထိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းမှာ ပေါင်းထားတဲ့ ပုဝါကို ဖြုတ်ပြီး မျက်နှာကို ဟိုတို့ ဒီတို့ လုပ်ရင်း “မိုးဦးကျသာ ဆိုတယ် ခုထိ ပူတုန်း” “အေးဟ ပူလွန်းလို့ ငါတောင် အဝတ်မကပ်နိုင်ဘူး၊ ဒီလို အပူမျိုးနဲ့ ဒီနှစ် ရေတောင် တင်ပါ့မလားဘဲ၊ မိုးကလဲ နည်းလိုက်တာ” ကျုပ်ကလဲ ထုံးစံအတိုင်း တယောက်ထဲလဲ ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ အပေါ်ပိုင်းက တုံးလုံး၊ လုံချည်တိုကိုတော့ ပေါင်ကြားစုထည့်လို့ တင်ပလင်ခွေ ဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ် ထိုင်နေတာ။ “ဟုတ်တယ်နော် ဦးမောင်လှကြီး၊ ခါတိုင်း ဒီအချိန်ဆို မိုးကကောင်းကောင်းရွာနေပြီ၊ ဒီနှစ်မှ မိုးကလဲ နောက်ကျလိုက်တာ” ပြောရင်း ခါးလောက်ဘဲ အဝတ်ရှိတဲ့ ကျုပ်ခန္တာကို မျက်လုံးဝေ့ကြည့်တာ သတိထားမိတယ်။
ဒီကောင်မ ဒီကိစ္စ တခုထဲနဲ့တော့ ငါ့ဆီရောက်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒီကိစ္စက ရွာထဲတွေ့ လှမ်းမေးလိုက်လဲ ရတဲ့ဟာကို ဘာကြောင့် ခြေရှည်ပြီး ငါ့လယ်ထဲထိ ရောက်လာလဲ မသိဘူး၊ တွေးမိပြီး စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။ “တွေ့တုန်းစပ်စုအုံးမယ်၊ နင်ကိုကြည့်ရတာ ချောလို့လှလို့ အရွယ်ကလဲ ငယ်၊ ရုပ်ရည်လေးကလဲရှိ၊ တယောက်ထဲ ရုန်းကန်နေရတာ၊ မပင်ပန်းဘူးလား၊ တပင်လဲ တပင်ထူ ဘို့ မစဉ်းစားတော့ဘူးလား” “အမလေး ပြောမှ ပြောတတ်တယ် ဦးမောင်လှကြီးရယ်၊ ကျမလို မုဆိုးမ ဘယ်သူ ယူမတုန်း” “ဟ မုဆိုးမ ဆိုပေမဲ့ နင်က လှတုန်း ပတုန်း ဆိုတော့ ကြိုက်တဲ့သူပေါ်ပြီး ယူမဲ့သူ ရှိမှာပေါ့ဟ” “မရှိပါဘူးတော်၊ မုဆိုးမ ဆိုမှ ဘယ်သူကယူမလဲတော့၊ ပြီးတော့ ခင်လှက ဘာလှလို့လဲ၊ ရွာထဲက အပျိုတွေက ခင်လှထက် အများကြီး သာပါ့တော်၊ ယူချင်းယူ သူတို့ သွားယူမှာပေါ့” “အေးလေ ဒါလဲဟုတ်တာဘဲ၊ မုဆိုးမ ဆိုတော့လဲ ခက်သား၊ နင်ကလဲ ကံဆိုးပါတယ်၊ နင့်ယောက်ကျားက ပိုးထိတာ အသိနောက်ကျလို့ ဖြစ်သွားတာ၊ ငါ့လိုသာ အသိစောရင် ကုရင် မှီတယ်” “ကုသိုလ်ကံပေါ့ ဦးမောင်လှရယ်၊ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ” ကျုပ် အဖြစ်နဲ့ယှဉ်ပြောရင်းနဲ့ ကျုပ် မအေး ကို ရုတ်တရက် သတိရသွားတယ်။
ခင်လှ သူလဲ မအေးလို ဖြစ်နေလို့ များလား၊ ဒါကြောင့် သူ မုဆိုးမ ဖြစ်တာထင်တယ်။ စဉ်းစားမိတာနဲ့ လွှတ်ကနဲ ပါးစပ်က ထွက်သွားတယ်။ ကျုပ်ဝသီ ကိုက ဒီလိုဘဲ၊ “ငါ အခုမှ စဉ်းစားမိတယ်၊ နင် မုဆိုးမ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း . . .” ပြောရင်းတမ်းလမ်း ကျုပ် တိကရဲ ရပ်သွားတယ်။ ဟိုက် သူက မိန်းခလေး ပြောလို့ မသင့်တော်ဘူးထင်တယ်လို့ စဉ်းစားမိပြီး စကားကို လျှောချလိုက်တယ်။ “အာ . . နင့်ကို ပြောလို့ မဖြစ်ပါဘူး၊ နင်လဲ သိချင်သိမှာပေါ့” “ဘာများလဲ ဦးမောင်လှကြီးရဲ့၊ ကျမကဘာသိရမှာလဲ” “အေး အေး မသိလဲ ပြီးရော၊ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး” ကျုပ်ဖာသာကျုပ် အတွေးပေါက်ပြီး ပြုံးစိစိ နဲ့ သူ့ကိုပြောတော့ သူက ပိုသိချင်တယ်နဲ့ တူတယ်။ အတင်း မရမက မေးတော့တာဘဲ။ “ဘာလဲ ဦးမောင်လှကြီး၊ ပြော ပြော” “အာ နင်ကလဲ ပြောလို့ မကောင်းပါဘူးဆိုမှ အတင်းမေးတော့တာဘဲ” “ဘာလို့ပြောလို့ မကောင်းရမှာလဲ၊ ဘာအကြောင်းမို့လဲ ပြော ပြော” “ဟ နင်သိပြီးသားလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့” ဒီလိုနဲ့ သူကလဲ အတင်းမေး၊ ကျုပ်ကလဲ ဒါဘဲ အပ်ကြောင်းထပ်ပြောရင်း ဂျာအေး သူ့ အမေရိုက်တဲ့ ဇတ်ခင်းနေတာ အတော်ကြာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ “ကဲ နင်ဒီလောက် သိချင်နေတာ ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီး ပြောရတာပေါ့။
နောက်မှ ငါ့ကို အဆိုးမဆိုနဲ့” “မဆိုပါဘူး၊ တခါထဲ ပြောဆိုမပြောဘူး ဈေးက ကိုင်နေသေးတယ်” “အော် နင်ကလဲ ပြောသင့်လား မသင့်လားလဲ ရှိသေးတယ်လေဟာ” “အမလေး ဒီလူနဲ့ ဒီလူ၊ ပြောပါဆိုမှ ရှည်နေသေးတယ် တခါတည်း” “ကဲ ဒီလောက် သိချင်တာ ပြောမယ်” ဆိုပြီး အော်ပြောရင်တောင် ဘယ်သူမှ မကြားတဲ့ နေရာမှာ သူ့ အနားနဲနဲတိုးလို့ လေသံကို နဲနဲနှိပ်ပြီး “နင် မုဆိုးမ ဖြစ်တာ နင့် ဟိုဟာ မှာ မှဲ့ပါလို့မဟုတ်လား” “ဘယ်လို ဘယ်လို ဦးမောင်လှကြီး ဘယ်ဟိုဟာလဲ” “အာ နင်ကလဲ၊ နင့် ဟိုဟာ ပါဆို။ နင့် မိန်းမ ဟဝှာလေဟာ၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား၊ ကဲ ပြော” ကျုပ်အပြောကို ခင်လှ ဘာသဘောကျတယ်မသိ၊ တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း ပြန်ပြောတယ်။ “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်၊ ဦးမောင်လှကြီးကလဲ၊ ကြံကြံဖန်ဖန် လာပြောပြန်ပြီ” “ဟဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟ၊ ငါ့ကို မှဲ့ကျမ်းကြေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက သေချာပြောပြသွားတာ၊ အဲ့နေရာ မှဲ့ပါတဲ့ မိန်းမတွေက ယောက်ကျားယူရင် မုဆိုးမ ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့၊ နင့်မှာ ပါတယ်မို့လား၊ ငါ့ကို မရှက်နဲ့ မှန်မှန်ပြော” “ဘယ်ကလာ ဦးမောင်လှကြီးများ ဘာရှက်ရမှာလဲ၊ အဲဒီနေရာမှာတော့ မပါ ပါဘူးတော်၊ ကျုပ်တကိုယ်လုံးမှာ မှဲ့က ရင်သားမှာသာရှိတာ၊ ရှိတာမှ သေးသေးလေးတောင် မဟုတ်ဘူး ထင်းနေတာ၊ ဟောဒီနေရာမှာ” ခင်လှက သူ့မှဲ့ရှိတဲ့ ညာဘက်ရင်သားနေရာကို အင်္ကျီပေါ်က လက်ညိုးနဲ့ ထောက်ပြရင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲပြောတယ်။ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းမရှိ။ မုဆိုးမ မို့လားတော့ မသိ၊ ကျုပ်ကလဲ အဲ့လို ပွင့်လင်းမှ သဘောကျတာနဲ့တော့ အံကိုက်။
“ဒါဆို နင်မုဆိုးမ ဖြစ်တာ အဲဒါနဲ့ မဆိုင်ဘူး ထင်တယ်၊ ကံတရားကြောင့်ဘဲလို့ ပြောရတော့မယ်ထင်တယ်၊ နင့်ယောက်ကျား ထွန်းသောင် ဆုံးတော့ နင်တို့ ညားတာ တနှစ်ကျော်ကျော်ဘဲ ရှိအုံးမယ် ထင်တယ်၊ “အင်း တနှစ်နဲ့သုံးလ ဘဲရှိသေးတာ၊ ခင်လှ ကံကို ဆိုးပါတယ်” “အေးပေါ့ဟာ။ သတ္တဝါ တခု ကံတခုပေါ့၊ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ ဒါနဲ့ တခါတလေ နင့်ယောက်ကျားကို သတိမရဘူးလား” “ရတာပေါ့ ဦးမောင်လှကြီးကလဲ၊ မေးမှ မေးတတ်တယ်” “ဟဲ့ ငါပြောတာ ဟို ရိုးရိုးသားသား သတိရတာ မေးတာမဟုတ်ဘူးဟ” ကျုပ်က ရယ်ကျဲကျဲ နဲ့ သွေးတိုးစမ်းလိုက်တယ်။ ခင်လှက ကျုပ်ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ လှမ်းမေးတာကို သဘောပေါက်ပုံနဲ့ ကျုပ်ပေါင်ကို လှမ်းရိုက်ရင်း “ဦးမောင်လှကြီး” လို့ သဘောပေါက်ပုံနဲ့ ကျုပ်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ် လေသံနဲ့ ကျုပ်ကိုလှမ်းအော်တယ်။ အော်တယ်သာပြောသာ လေသံက မကြိုက်တဲ့ အသံမဟုတ်မှန်း ကျုပ်ချက်ခြင်းသိလိုက်တာကြောင့် အလျှော့မပေးဘဲ “ဘာလဲဟ၊ ငါက သိချင်လို့” “ဘာလို့ သိချင်ရတာလဲ” “အော် ငါတို့ အဖြစ်နဲ တိုက်ဆိုက်သလားလို့” “ဘာအဖြစ်လဲ” “နင်သိတဲ့ အတိုင်း သန်းမြလဲ ယောက်ကျားနဲ့ ကွဲပြီး ပြန်ရောက်လာတာ မို့လား၊ အဲဒီမှာ သူလဲ ခန ခန သတိရပြီး ငါနဲ့ ညားတာလေ၊ ဟား ဟား ဟား ဟား” “ဦးမောင်လှကြီးကတော့ ပြောပြီ၊ သန်းမြတော့ ဟုတ်တာပေါ့၊ ကျုပ်မှာတော့ သတိရလဲ ညားမဲ့သူ မရှိပါဘူးတော်” “ပြောပါ နင်တကယ်သတိရလား” ခင်လှ ချက်ခြင်း မဖြေ၊ ကျုပ်ကို လှမ်းကြည့်တယ်။ ကျုပ်ကလဲ ခင်လှကို ကြည့်တယ်။ ကြည့်ရင်း ကျုပ်ရင်ထဲ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ သွေးပူလာသလိုဘဲ၊ ပြောင်ကြီးတောင် နဲနဲတင်းလာတယ်။
ကျုပ်တို့ အချင်းချင်း မျက်စိချင်း ခနဆုံပြီး ခင်လှ ပြုံးတုန်းတုန်း လုပ်ရင်း ဟိုဘက်လှည့်သွာားတယ်။ ပြီးတော့ “ရတာပေါ့ ဦးမောင်လှကြီးကလဲ၊ မရဘဲ နေမလား၊ ဟွန်း ဘာတွေ လျှောက်မေးနေမှန်း မသိဘူး၊ မပြောလိုက်ချင်ဘူး” တဲ့ကျုပ်နဲနဲ သဘောပေါက်သွားတယ်၊ လူသူမနီးတဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ ကျုပ်နဲ့ ခင်လှ နှစ်ယောက်ထဲ။ သူ့စိတ်ထဲလဲ တခုခု ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကျုပ်သိလိုက်ပြီ၊ “ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ၊ ငါသိတယ် ငါသိတယ်” ကျုပ်က ရယ်ကျဲကျဲ နဲ့ လှမ်းပြောလိုက်တော့ သူက “ဘာသိတာလဲ၊ ဦးမောင်လှကြီးနော်” “နင်သတိရတာ ကိုပြောတာလေ၊ ငါသိတာပေါ့၊ ထွန်းသောင်ကြီး အကြောင်း၊ ဒီကောင်လား အရင်က ငါတို့ သူ့ကို ထွန်းတောင်လို့ ခေါ်တာ၊ တောင်လွန်းလို့ မိန်းမ မြန်မြန်ရတာလေ ဟား ဟား ဟား ဟား” “ဦးမောင်လှကြီးကတော့ ပြောပြီ ခစ် ခစ်” “အမယ် ငါပြောတာ မဟုတ်တာကျနေတာဘဲ၊ ကဲပြော တနေ့ဘယ်နှစ်ခါလဲ ဟား ဟား ဟား” “သွား . . ဦးမောင်လှကြီးရော မတောင်တာကျနေတာဘဲ၊ တောင်လွန်းလို့ သန်းမြနဲ့ ညားတာမဟုတ်ဘူးလား” “ဟား ဟား ဟား ဟား အေးပေါ့ဟ” “ခစ် ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီး ပုံကြည့်တာနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်မှန်း လူတိုင်းသိတယ်။
ဒါကြောင့် ရွာထဲက ကောင်မတွေ ပြောနေကြတာ ဒီလောက် ထတဲ့ သန်းမြ မောင်လှ နဲ့ တွေ့မှ ငြိမ်ကျသွားတာ တဲ့ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” ရွာထဲကကောင်မတွေ တကယ်ပြောတာလား၊ ခင်လှဘဲလုပ်ဇတ်ထွင်တာလားမသိ။ ဒီအပြောနဲ့ဆို အခြေနေက ကောင်းမှန်း ကျုပ်သိလိုက်ပြီ။ “ဟား ဟား ဟား ဟား နင်ပြောတာမှန်တယ်၊ အခုတောင် နင့်နဲ့ တွေ့ပြီး တောင်နေပြီနော်” တဟားဟားနဲ့ စသလိုနောက်သလို ပြောရင်း သူ့လက် လမ်းဆွဲလိုက်တယ်၊ “အဲ့ ဦးမောင်လှကြီးကလဲ . . . .” သူ့လေသံ မဆုံးခင်မှာ ကိုယ်ပါ လှမ်းဖက်လိုက်တော့ ခင်လှက လေသံခပ်ပျော့ပျော့နဲ့ “ဦးမောင်လှကြီးရယ် ခင်လှကို အထင်တော့ မသေးပါနဲ့နော်” ညင်းတာတော့ မဟုတ်၊ သူ့ပုံက ခံလဲခံချင်တယ်။ အထင်သေးမှာလဲ စိုးတဲ့သဘောလို ဖြစ်နေတာမို့ “မသေးပါဘူးဟာ၊ ငါ နင့်ကို နားလည်ပါတယ်။ ငါလဲ နင့်လိုပါဘဲဟာ” “ဦမောင်လှကြီးကလဲ ပြောပြီ၊ ဦးမောင်လှကြီးက မိန်းမနဲ့ဟာ” “မိန်းမနဲ့ ဆိုပေမဲ့ ခု သန်းမြက ငါကို အနားမကပ်မခံတော့ဘူးဟ” “ဒီလောက်တောင်တဲ့သူ အနား အကပ်မခံဘဲ နေမလား၊ လျှောက်ပြောနေ” “နင်မသိပါဘူးဟာ၊ ငါတို့အကြောင်း။ သန်းမြက အခုတလော ဘာဖြစ်တယ် မသိဘူး၊ ငါ့ကို အကပ်ကိုမခံတော့တာ၊ သူရိုးသွားလို့နေမှာပေါ့” “ဒါကြောင့် ခု ခင်လှကို လာကပ်တာပေါ့လေ ဟုတ်လား” “ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဒါကတော့ နင်နဲ့ငါက လိုအပ်တာချင်းတူနေတာကိုး၊ လူဆိုတာ လိုအပ်တာ တူမှ ပေါင်းလို့ရတာဟ” “ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီးက ပြောတတ်တယ်” “ဟဲ့ ငါပြောတာ မဟုတ်လို့လား၊ လာ လာ ငါ့ပေါင်ပေါ် အိပ်ချလိုက် တော်ကြာ အဝေးကတယောက်ယောက်ဖြတ်သွားရင် နှစ်ယောက်ပူးနေတာ မြင်သွားလို့ လာစပ်စုနေအုံးမယ်” “ဟွန်း ဦးမောင်လှကြီးက ရိုးမလိုလိုနဲ့ ဥာဏ်ချည်းဘဲ” ပါးစပ်ကသာ ပြောပေမဲ့ ခင်လှက ဘေးဘီ လှမ်းကြည့်ပြီး ကျုပ်ပေါင်ပေါ် လှဲချလိုက်တယ်။
ပေါင်ကြားက ပြောင်ကြီးကတော့ စားရတော့မယ်မှန်း သိလို့လား မသိ တော်တော်လေးကို တင်းနေပြီ၊ ကျုပ်က ခင်လှ ခေါင်းကို သေသေချာချာ ကျုပ်ပေါင်ကြားထဲ ဆွဲထည့်လိုက်တော့ တင်းနေတဲ့ ပြောင်ကြီးက ခင်လှ ခေါင်းနဲ့ ထိရော။ “အမလေး ဘာကြီးလဲဟ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” “သိချင်ရင် ကိုယ့်ဖာသာကြည့်၊ ငါက ခု နင့် နို့က မှဲ့ကို ကြည့်မလို့” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” ပြောရင်း ကျုပ်ပေါင်ပေါ် ခေါင်းတင်ပြီး ပက်လက်လဲနေတဲ့ ခင်လှ အကျီကို တလုံးချင်း ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ခင်လှက ကျုပ်ကြယ်သီးဖြုတ်နေတာကို မညင်း။ “ဦးမောင်လှကြီးနော်၊ ခင်လှက ကိုထွန်းသောင်ဆုံးကတည်းက ဘယ်သူနဲ့မှ ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ အထင်တော့ မသေးနဲ့၊ ခု ဦးမောင်လှကြီး မို့လို့” “ဒါတွေ ငါနားလည်ပါတယ် ခင်လှရာ၊ နင်ပြောမနေနဲ့၊ ခု ငါ့ကို ထွန်းသောင်လို့ဘဲ သဘောထားလိုက်” “ဦးမောင်လှကြီကရော ခင်လှကို သန်းမြ လိုသဘောထားမှာမို့လို့လား” “ငါက နင့်ကို သန်းမြ လို့တော့ သဘောမထားပါဘူး။ နင်က ပိုလှနေတဲ့ဟာ၊ နင့်ကို နင်လို့ဘဲ သဘောထားမယ်” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီး ကတော့လေ ပြောတတ်တယ်” ပြောရင် အင်္ကျီကြယ်သီးတွေ ပြုတ်တော့ ဘော်လီကို ဆွဲလှန်ရင်း ထင်းနေအောင် ပေါ်နေတဲ့ မှဲ့ကို လက်နဲ့ အသာပွတ်ကြည့်ရင်း “မှဲ့က နင့်ရင်သားမှာ ထင်းကနဲဘဲဟ၊ ဒါကြောင့်ထင်တယ် နင့်နို့တွေ ထွားတာ၊ ငါက အဲလိုမှ ကြိုက်တာ” ပြောလဲပြော လက်က နို့အုံကြီးကို ဆုတ်လို့၊ အိကနဲ အိကနဲ ခင်လှနို့ ကိုင်လို့ကေင်းချက်၊ ကိုင်နေရင်း အားမရတော့ ကုန်းစို့လိုက်တယ်။
“အိ” ခင်လှဆီက အိ ကနဲ အချက်အသံထွက်ပြီး တိတ်သွားတယ်။ ခနလေးကြာတော့ တဟင်းဟင်း နဲ့ အသက်ရှုသံ ခပ်ပြင်းပြင်းထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်က ကျုပ် ခန္တာကိုယ် ကိုဟိုပွတ်ဒီပွတ်နဲ့၊ နောက် အလိုလို ကျုပ်ပေါင်ကြားထဲ ဝင်လာပြီး ပြောင်ကြီးကို ဖမ်းဆုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါမှ ကျုပ်ကြိုက်တာ၊ ခင်လှနို့က ထွားကလဲထွား၊ ကိုင်လို့လဲကောင်း၊ စို့လို့လဲ ကောင်းတာမို့ အတော်ကြာတယ်၊ တမောစို့ပြီးမှ “ခင်လှ” “အင်” “နင် ရွာထဲက ရေခဲချောင်းစားဖူးလား” “အင်း ဘာဖြစ်လို့လဲ” “အော် ငါ့ ရေခဲချောင်း စားမလားလို့” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် ဦးမောင်လှကြီးဟာက ရေခဲချောင်းလဲ မဟုတ်ဘူး၊” ပါးစပ်က ပြောပေမဲ့ ခင်လှ ပက်လက်လှဲနေရာက ကျုပ်ဘဲ စောင်းလို့ ကျုပ်ကောင်ပြောင်ကြီးကို မျက်နှာချင်း ဆိုင်လိုက်တယ်။ သေချာကိုင်ကြည့်ရင်း သူ့ နှုတ်ခမ်းကို ဝက်လိုစူလို့ ပြောင်ကြီးနဲ့ တေ့လိုက် ခွာလိုက် လုပ်ကစားနေရင်း “ဦးမောင်လှကြီးရော ဘိန်းမုံ့ စားဖူးလား ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” သူ့အပြောကို ကျုပ် ချက်ခြင်း သဘောပေါက်တာမို့ “ဘာလဲ နင့်ယေက်ကျား ထွန်းသောင်ကြီးက ဘိန်းမုံ့ ကြိုက်လို့လား” “အင်း အရမ်းကြိုက်တာ” “သူကြိုက်တာလား နင်ကြိုက်တာလား” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” ကျုပ်ဘာမှမပြောတော့၊ ကျုပ် ခင်လှ ဘေးပြောင်းပြန်အိပ်ချလိုက်တယ်၊ ကျုပ်ခေါင်းက ခင်လှတင်ပါးနား၊ သူ့ ထမီကို ဆွဲဖြေချလို့ ကျုပ်မျက်နှာပေါ် ဆွဲတင်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ပြောင်ကြီး ခင်လှပါးစပ်ထဲ ရောက်သွားမှန်း ကျုပ်သိလိုက်တယ်။
ခင်လှခြေထောက်တွေကို ကွေးလို့ ကျုပ်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်သလို ပုံစံပြောင်းလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ ဘိန်းမုံ့ကြီးက ကျုပ်မျက်စိရှေ့ ထင်းကနဲ။ ဆုံးသွားတဲ့ သူ့လင် ကြိုက်လဲကြိုက်စရာဘဲ၊ အမွေးတွေထူလပြစ်နဲ့ မဲတူးနေတဲ့ မုံ့မျိုးမဟုတ်၊ အမွေးကခပ်ပါးပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားက ညိုတိုတို ဖြစ်နေပေမဲ့ အကွဲကြောင်းအထဲက နီရဲလို့ အရည်ကြည် တစို့စို့နဲ့ အစေ့ကို ပြူလို့၊ ကြည့်တာနဲ့ ဖိစုတ်ချင်စရာကောင်းနေတာ။ ကျုပ်လဲ သေသေချာချာကြည့်ရင်း သူ့တင်ပါးကို သေချာကိုင်ပြီး ကျုပ်ပါးစပ်ဝ တေ့ချလိုက်တယ်၊ “အီး . . .” ခင်လှဆီက ရုတ်တရက် အသံကြားရပြီး ပြန်ပျောက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ပြောင်ကြီးဆီက နွေးကနဲ နွေးကနဲ နဲ့။ နှစ်ယောက်သား အပေးအယူ မျှနေတာ ဘယ်ညာလူးလို့၊ ခင်လှက အပေါ်ရောက်လိုက်၊ ကျုပ်က အပေါ်ရောက်လိုက်၊ နောက်ဆုံး ကျုပ်မရတော့၊ ခင်လှရေ ငါထွက်ပဟ ဆိုပြီး တဗြစ်ဗြစ် နဲ့ အားရပါးရ ပန်းထွက်တော့တာဘဲ။ အဲဒီမှာ နှစ်ယောက်သား ညိမ်ကျသွားတာ။ခနလောက် ညိမ်နေပြီး “အမလေး ခင်လှရယ် ဘယ်လိုများ စုတ်ထည့်လိုက်တာလဲဟ၊ ငါတောင် မအောင့်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်” ကျုပ်က ငုတ်တုတ်ထထိုင်လို့ မောဟိုက်သံနဲ့ ပြောတော့ ခင်လှက တခစ်ခစ်ရယ်တယ်။ သူ့ပုံကြည့်ရတာ ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ ကျုပ် သူ့ကို လုပ်ပေးတာ ထိမှထိရဲ့လားလို့ သံသယဝင်လာတာမို့ လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ဟဲ့ နင့်ကိုငါ လုပ်ပေးတာရော ကောင်းရဲ့လား” “ဦးမောင်လှကြီးကလဲ . . ဘာတွေ လာမေးနေတာလဲ” “ဟဲ့ ငါလုပ်တာ ကောင်းမကောင်း သိချင်တာပေါ့ဟ၊ ပြောစမ်းပါ” “မသိဘူးလား ဒီမှာ ဒီလောက် လူးနေတာ၊ တခါတည်း လူကို မနားတမ်း လုပ်နေတဲ့ဟာ၊ ဒီမှာ အသက်တောင်ရှုလို့ မရတော့ဘူး ဟွန်း” ခင်လှက ညုတုတု နဲ့ ပြန်ပြောတဲ့ လေသံကြောင့် ကျုပ်မှာအမောပြေရုံက စိတ်ကပြန်လည်လာသလိုတောင် ဖြစ်လာတယ်။
“ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ နင့်ဘိန်းမုံ့က တကယ်စားကောင်းတယ်ဟ၊ ငါလုပ်တာ နင်ရော ပြီးလား” “ပြီးလိုက်တာမှ ဦးမောင်လှကြီးရယ်၊ တရှုးရှုးနဲ့ ပန်းနေတာ ဦးမောင်လှကြီးကို အားတောင်နာတယ်” “ဟဲ ဟဲ ဒါမျိုးက အားမနာရဘူးဟ၊ ပန်းသာပန်း၊ များများပန်းလေ ငါကြိုက်လေဘဲဟ” စကားသာပြောနေပေမဲ့ ခင်လှက ပက်လက်လဲနေရာက မထ၊ ကျုပ်လဲ ပြီးသာပြီးသွားတယ် အာသာကမပြေ သလိုလို၊ သူ့အပြော နဲ့ အမူအယာကို ကြည့်ပြီး စိတ်က ပြန်ထလာတာမို့ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ဝင်ထိုင်ရင်း သူ့ခြေထောက်ကို ဆွဲမလို့ ကျုပ်ကောင်ပြောင်ကြီကို သူ့ ဘိန်းမုံ့နဲ့ ကပ်ပေးလိုက်တယ်။ ခင်လှက ကျုပ်အဖြစ်ကို ပြုံးကြည့်ရင်း ကျုပ်အလိုကျ ခြေမြှောက်ပေးတယ်။ သူလဲ မဝသေးတဲ့ပုံ။ ဘိန်းမုံ့နံ့ ရတာနဲ့ အန်ထားလို့ ခေါင်းစိုက်သယေယာင်ယောင် ဖြစ်နေတဲ့ ပြောင်ကြီးက ချက်ခြင်း ခေါင်းပြန်ထောင်လာတော့တာဘဲ။ ဒါမျိုးဆို ကျုပ်ကောင်ပြောင်ကြီးက စိတ်ချရတယ်။ ၃ ချီလောက်တော့ မနားတမ်းခေါင်းထောင်နိုင်တဲ့ကောင်။ သူ့ဘိန်းမုံ့ကို ပြောင်ကြီးလာထောက်တာနဲ့ ခင်လှဆီက “ဖြေးဖြေးအရင်လုပ်နော် ဦးမောင်လှကြီး၊ ခင်လှ မလုပ်တာအရမ်းကြာပြီ” “အေးပါ ငါသိပါတယ်ဟ” ကျုပ်လဲ အချိန်မဆိုင်းဘဲ ခေါင်းထောင်နေတဲ့ ပြောင်ကြီးကို စိုရွှဲ ချွဲအိ နူးညံ့နေတဲ့ ခင်လှဘိန်းမုံ့ထဲ အသာဘဲ ဖိထိုးလိုက်တော့ ခပ်လွယ်လွယ်ဘဲ တထစ်ချင်းတိုးဝင်သွားတော့တာပါဘဲ။ ဒီကောင်မ မလုပ်တာ အရမ်းကြာပြီ ပြောပေမဲ့ အပေါက်ကတော့ ပိတ်မနေ၊ ဧကန္တ သူ့လင် ထွန်းသောင်ကို သတိရတိုင်း ခရမ်းသီးနဲ့ စခန်းသွားနေလား မသိ။ သူ့အိမ်နောက်ဖေးမှာလဲ တနိုင်စာ ခရမ်းစိုက်ခင်းနဲ့။ အဆုံထိ ပြောင်ကြီးကို ထိုးသွင်းပြီး ခင်လှ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မျက်စိလေးမှေးလို့ ပြုံးတုံးတုံး မျက်နှာပေးနဲ့ ပါးစပ်မပွင့်တပွင့်ဟလို့၊ ကြည့်စမ်း အပြည့်အဝ ကို အရသာ ခံနေတာ။ သူ့ပုံကြည့်ပြီး ကျုပ်တော်တော် အားတက်လာတယ်။
စောစောက မောတာတွေတောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း မသိ။ ဒါနဲ့ဘဲ ပြောင်ကြီးကို အသာဆွဲထုတ်လို့ ခပ်ဖိဖိလေး ထပ်သွင်းကြည့်တယ်။ ဒါလဲ ရှောရှောရှူရှူ ပလွပ်ကနဲ ဝင်သွားတာပါဘဲ။ လေး ငါး ချက်လောက် အသာစမ်းပြီး ကျုပ်အားပါတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ တန်းသွင်းတိုက်တာ ခင်လှ ပါးစပ် မပွင့်တပွင့်ကနေ ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး ဟ သွားတာဘဲ ရှိတယ်။ မျက်နှာပေးကမပြောင်း၊ မထီမဲ့မြင် မျက်နှာပေးနဲ့ ကျုပ်လုပ်နေတာ မမှု့တဲ့ ပုံမို့ ကျုပ် အသားကုန်ဘဲ မနားတမ်းဆောင့်ပေးလိုက်တာ ခင်လှ နို့အုံကြီးဆို ပင်လယ်လှိုင်းထနေသလို ယန်းလို့။ အဲဒီတော့မှ ခင်လှ ဆီက တအအ နဲ့ အသံထွက်လာပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဖွဖွကိုက်လို့ မျက်စိပွင့်လာပြီး ကျုပ်ကို ကြည့်တယ်။ ကျုပ်ကလဲ သူ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး လုပ်နေမို့ ချက်ခြင်းဘဲ အကြည့်ချင်းဆုံတာပေါ့။
ကျုပ်လဲ မောနေတာမို့ ဆောင့်ချက်ကိုရပ်ပြီး အဆုံးထိ ထိုးသွင်းလို့ သူ့ကို လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ပြီးသွားလို့လား” “အင်း၊ ဦးမောင်လှကြီး အရမ်းကြမ်းတာဘဲ” မျက်နှာပေးက ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ လေသံက မခံနိုင်တဲ့ လေသံမဟုတ်။ သဘောကျတဲ့လေသံ။ “မကြမ်းပါဘူးဟ၊ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့၊ ဒါတောင် ငါကလျှော့ထားတာဟ” ကျုပ်ကလဲ ပြောရင်း ဖြဲကားထားတဲ့ သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို စုလို့ ဘိုက်ပေါ်တွန်းတင်လိုက်တယ်။ ကြွတက်လာတဲ့ သူ့ဘိန်းမုံ့ကို တချက် နှစ်ချက်လောက် ဖိအဆောင့်မှာ “နားပါအုံးလား ဦးမောင်လှကြီးရယ်တဲ့” ကြည့်ရတာ သူလဲ နားချင်ပုံဘဲ၊ ကျုပ်ကလဲ ခန နားချင်တာနဲ့ အတော်ဘဲ။ ခန နားပြီး နင်အပေါ်က စိတ်ကြိုက်လုပ် ဟုတ်လား လို့ပြောရင်း မနားခင် အဆစ်ယူတဲ့ သဘောနဲ့ လေးငါးချက်လောက် ဆက်တိုက်လေး ဆောင့်ပြီး သူ့ဘေးလှဲချလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံးက အတွေ့ကြုံ ရှိပြီးသားမို့ အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့။ အခြေအနေက အားနာစရာလဲ မလိုတော့။ နှေးနှေးတလှည့် မြန်မြန်တလှည့်၊ နားလိုက် လုပ်လိုက်နဲ့ ခင်လှနဲ့ ကျုပ် ပုံစံမျိုးစုံ သုံးပြီး စခန်းသွားလိုက်တာ ညနေစောင်း အိမ်ပြန်တော့ ကျုပ်မှာ ဒူးတောင် ချောင်လို့။ ကျုပ်လဲ ခုမှဘဲ အဆင်ပြေသွားတယ်။ မအေးကိုလဲမေ့၊ သန်းမြ အကပ်မခံလဲ ဂရုမစိုက်တော့။ ခင်လှလောက် ကျုပ်အပေါ် ဘယ်သူမှ မကောင်းမှန်း ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်။……ပြီးပါပြီ။
လူပျိုရည်ပျက်ခဲ့ တဲ့ ဖြစ်ရပ်